Google Chat Bot - च्याटमा तपाईको पीपीसी रिपोर्टहरू!
clever ads Google Chat साथ लग ईन गर्नुहोस्
Google Chat साथ लग ईन गर्नुहोस्
Google Ads , माईक्रोसफ्ट विज्ञापन र फेसबुक विज्ञापनहरूको लागि गुगल कुराकानी बोट
मापन र आफ्नो पीपीसी खाता 'प्रदर्शन को रेखांकन आफ्नो बोट सोध्न
एक पटक आफ्नो सेट थ्रेसहोल्ड पूरा प्राप्त गर्न तपाईंको आफ्नै अलर्ट बनाउन
Google Ads र फेसबुक विज्ञापन रणनीति अनुकूलन गर्न सुझावहरूको लागि तपाईंको बोटलाई सोध्नुहोस्
Google कुराकानी थप्न
Clever Ads Google Chat Bot फाइदा
हामी तपाईंलाई समय बचत मन तपाईं फिर्ता बस्न र कफी को कि बिहान कप आनन्द उठाउन सक्छौं त! ☕
एक कम ट्याबमा नजर राख्नुहोस्। केवल तपाईंको लागि महत्त्व राख्ने गुगल, बिंग, र फेसबुक Ads
तपाईंका कार्यहरू सही बाटो संगठित
यो गुगल कुराकानी बोट तपाईं सीधा गुगल कुराकानी मा मापन, रेखांकन, र पनि सारांशमा आफ्नो अभियान को प्रगति हेर्न अनुमति दिन्छ।
बजारमा समान उपकरणहरूको तुलनामा, Clever Ads Google Chat Bot एकीकरणलाई तपाईंलाई पैसा पनि तिर्ने आवश्यकता पर्दैन।
तपाईंको रुचिमा आधारित फेसबुक Ads , Google Ads , माइक्रोसफ्ट Ads फिल्टर गर्नुहोस् र उनीहरूको प्रदर्शनमा एक झलक पाउनुहोस्।
तपाईंको आफ्नै ड्यासबोर्डमा पहुँच
तपाईंको आफ्नै ड्यासबोर्डमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस् र यसलाई अनुकूलित गर्नुहोस्। तपाईले हेर्न चाहानु भएको मेट्रिक्स मात्र हेर्नुहोस्। तपाईको रिपोर्ट अनुसूचित गर्नुहोस् र तपाईको Google Chat Bot एकीकरणको साथ तपाईको अनुकूलित सतर्कहरुलाई कन्फिगर गर्नुहोस्।
Clever Ads Google कुराकानी बोट स्थापना गर्ने?
मापन र रेखांकन
Google Ads , माईक्रोसफ्ट विज्ञापन, र फेसबुक विज्ञापन अभियान प्रदर्शन प्रदर्शन सम्बन्धित ग्राफ र मेट्रिक्स। प्रभावहरू, रूपान्तरणहरू, क्लिकहरू बुझ्नुहोस् - सबै गुगल च्याटको माध्यमबाट!
ड्यासबोर्डमा, तपाई एकपटक तपाईको अनुकूलन सेट थ्रेसहोल्डहरू पूरा भएपछि Google Chat मार्फत सूचना प्राप्त गर्न तपाईको आफ्नै अलर्टहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ। एक पैसा बढी खर्च नगर्नुहोस्!
आफ्नो रुचि च्यानलमा मापन र डाटा दैनिक / साप्ताहिक सारांशमा प्राप्त गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई फाइलमा राख्न र आफ्नो टोलीसँग साझेदारी गर्नुहोस्। यो तपाईंमा भर पर्छ!
साधारण सन्देश पठाउँदा तपाईंको फेसबुक वा Google Ads रणनीति को बारे सजिलो को लागी सुझाव को लागी बनाउँछ। हामी तपाईंलाई भन्न सक्दछौं कि कुन अभियान प्रकार, समायोजनहरू, र संशोधनहरू तपाईंको लक्ष्यहरू फिट हुन्छन्। तपाईंको बिक्रीलाई बढावा दिनुहोस्!
कसरी सुरु गर्न?
केवल एक मिनेटमा, तपाईं आफ्नो खातामा Clever Ads Google Chat Bot यो सुपर छिटो र सजिलो छ!
"Google कुराकानीमा थप्नुहोस्" बटन क्लिक गरेर Google च्याटमा Clever Ads
तपाईंको विज्ञापनदाता खातामा लग इन
आफ्नो Google, माईक्रोसफ्ट र / वा फेसबुक खाता प्रयोग गरेर लग इन तपाईंको विज्ञापन खातामा लिङ्क।
आफ्नो प्राथमिकता कन्फिगर
पहुँच तालिका रिपोर्ट, कन्फिगर सचेतक, कन्फिगर आफ्नो बोट, आदि आफ्नो ड्यासबोर्डमा
अनुप्रयोगको सबैभन्दा बाहिर बनाउन
Google कुराकानी गर्न जाने र प्रयोग गर्न सुरू सबै हाम्रो बोट तपाईं प्रस्ताव विशेषताहरु!
यदि तपाईंसँग एउटा प्रश्न छ जुन तल उत्तर दिइएन भने, तपाईं हामीलाई क्लेभरेडमा एक सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ। com>> सहयोगी @ cleverads । कम।
Google Chat Bot एकीकरणले वास्तवमा के गर्छ?
यस अनुप्रयोगको उद्देश्य तपाईको जीवन अलि सजिलो बनाउनु हो र हामी "त्यस बिहानको कफीको लागि तपाईलाई यति धेरै मन पराउने पर्याप्त समय बचाउन चाहन्छौं।" Google Ads खाता लिंक गर्नुभयो जुन तपाईंसँग काम गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं आफ्नो Slack , Microsoft Teams वा Google chat सिधै बोटलाई टेक्स्ट पठाएर मेट्रिक्स र ग्राफहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरीकाले, तपाईं आफ्नो बहुमूल्य समय बचत गर्दै हुनुहुन्छ किनकि तपाईंले प्रत्येक दिन Google Ads
अनुसूचित रिपोर्टहरू : तपाईंको टोलीको लागि सार्वजनिक गर्न तपाईंको मेट्रिक दैनिक वा साप्ताहिक तपाईंको मनपर्ने च्यानलमा प्राप्त गर्नुहोस् वा प्रत्यक्ष सन्देश विकल्प छनौट गरेर यसलाई आफैंमा राख्नुहोस्।
सुझावहरू : सरल सन्देशको माध्यम मार्फत सबै Google Ads रणनीति कसरी सुधार गर्ने बारे सुझावहरूको लागि सोध्नुहोस्। हामी अभियानको बिभिन्न प्रकार थप्ने, अभियानको बजेट समायोजन गर्ने, वा अभियान लक्ष्य परिमार्जन गर्ने जस्ता चीजहरूको सुझाव दिन सक्षम हुनेछौं।
चेतावनीहरू : तपाइँको विज्ञापन खाता संग अधिक सुरक्षित महसुस। Clever Ads बोटले तपाईंलाई सूचित गर्दछ यदि तपाईंको थ्रेसहोल्ड पूरा भयो भने।
Google Ads खाता लि to्क गर्नु पर्छ?
Google Ads खाता लिंक गर्न सुरक्षित छ?
एकचोटि तपाईले गुगल खातामा साईन ईन गर्नुभयो भने हामी हाम्रो ईन्क्रिप्टेड डाटाबेसमा पहुँच टोकन बचत गर्दछौं। कुञ्जी केवल हाम्रो Clever Slack , Microsoft Teams वा गुगल कुराकानीसँग कहिले पनि सेयर हुँदैन। Google Ads प्रासंगिक डाटा प्राप्त गर्छौं, हामी यसलाई फर्म्याट Slack वा Microsoft Teams सन्देशमा रूपान्तरण गर्दछौं, र हामी यो कुराकानीमा पठाउँदछौं जुन तपाईंले आदेश पठाउनुभयो।
Clever Ads द्वारा Google Chat Bot बारेमा अधिक: तपाईंको सबै गुगल च्याट मेट्रिक्स र डाटा!
तपाईं हाम्रो उपकरण प्रयोग र यसको सबै लाभ र फाइदा रमाइलो गर्न आवश्यक सबै सिक्न ... यो साँच्चै मुक्त!
के हामी तपाईं र तपाईंको व्यापार प्रस्ताव
Google Chat Bot फाइदाहरू र फाइदाहरू
Clever Ads Google Chat Bot एकीकरणबाट के पाउनुहुनेछ? तपाईको गुगल, माईक्रोसफ्ट र / वा फेसबुक विज्ञापन खाताहरू हाम्रो अनुप्रयोगमा एकीकृत गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो गुगल च्याटमा तपाईंको अभियानको सबै मेट्रिक्स र डाटा राख्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंको पीपीसी रणनीति को प्रदर्शन अधिक नियन्त्रण र पहिले भन्दा अप टु डेट छ, प्लस तपाईं सतर्कता र रिपोर्टहरू अनुकूलित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, जुन तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ, जब तपाईं चाहनुहुन्छ, तपाईंको च्याटमा। यो सजिलो हुन सक्दैन!
मनमा राख्न सबैभन्दा राम्रो अभ्यासहरू
Clever Ads Google Chat Bot एकीकरणबाट अधिक लिने
Clever Ads Google Chat Bot उपकरणको कसरी अधिक प्राप्त गर्ने? तपाईको फेसबुक विज्ञापनहरू, माईक्रोसफ्ट विज्ञापन, र Google Ads विज्ञापन खाताहरू Google Chat Bot अनुप्रयोगको साथ सबै विकल्पहरू मध्ये अधिक निचोरेर।
100% सुरक्षित प्रक्रिया, प्रतिज्ञा
Clever Ads हामी Google Ads प्रीमियर पार्टनर हो, त्यसैले हामी तपाईंलाई आश्वासन दिन्छौं कि हामीसँग एकीकरण प्रक्रिया १००% सुरक्षित छ। Clever Ads Google Chat Bot विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ।
जब तपाईं आफ्नो गुगल खाता लिंक गर्नुहुन्छ, तपाईं हामीलाई आफ्नो अभियान वा ads परिवर्तन गर्न पहुँच वा अनुमति दिनुहुन्न, तर यो न्यूनतम अनुमति हो जुन हामी तपाईंलाई तपाईंको डाटा, मेट्रिक्स, रिपोर्टहरू, र तपाईंको रणनीति र विज्ञापनको अनुकूलित सतर्कताहरू पठाउन आवश्यक छ। तपाईंको Google chat अभियानहरू।
तपाईको खाता र तपाईका ads सँधै तपाईको हातमा हुन्छन्, तपाईलाई केहि चिन्ताको चिन्ता गर्नु पर्दैन यदि तपाइँ अझै पनी श doubts्का छन् र हामीलाई केहि सोध्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं हामीलाई ईमेल पठाउन सक्नुहुन्छ असिस्टेन्ट @ assistant@cleverads.com , हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुशी छौं।
तपाईं सबै केहि गर्न छैन, न त तलब केहि
हो, तपाईं सहि पढ्नुहुन्छ। हामी सबै कुराको ख्याल राख्छौं, तपाईले आफ्नो नियन्त्रण प्यानलमा मात्र कन्फिगर गर्नुपर्नेछ अलर्ट र रिपोर्टहरू तपाईले प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ र कहिले (दैनिक वा साप्ताहिक) र ... तपाईंको Google Chat तपाईंको मेट्रिक्स र ग्राफहरू प्राप्त गर्न सुरु गर्नुहोस्!
Clever Ads Google Chat Bot तपाईंले औंला उठाउनु पर्दैन, हामी सबै कुराको ख्याल राख्छौं। तपाईं यसलाई कोशिस गर्न के पर्खदै हुनुहुन्छ?
Clever Ads र यसको Google Chat Bot किन विश्वास गर्नुहुन्छ?
Clever Ads , जुन हामीले अघि नै भन्यौं, गुगल प्रिमियर पार्टनर हो, र गुगलमा विज्ञापन गर्न १,000०,००० भन्दा बढी व्यवसायहरूलाई मद्दत गरिसकेको छ र तिनीहरूका अनलाइन मार्केटि marketing रणनीतिहरूमा सफलता प्राप्त गर्न ... के तपाईं प्रयास नगर्ने एक मात्र हुन जाँदै हुनुहुन्छ? हाम्रो Google Chat Bot अनुप्रयोग? केहि चीज जुन तपाईलाई घण्टा कठिन डेटा विश्लेषण र अनुसन्धान हुन सक्छ ... पूर्ण रूपमा स्वचालित! बोरिंग एक्सेललाई बिदाइ दिनुहोस् र यो सबै तुरून्त गर्नुहोस्, निजीकृत गर्नुहोस्, र तपाईंको गुगल च्याटमा। हामी तपाइँलाई आश्वस्त गर्दछौं कि यो एक सय प्रतिशत सुरक्षित प्रक्रिया हो, Google Ads प्रिमियर पार्टनरको रूपमा, हामी तपाइँलाई अत्यन्त सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछौं।
एकीकृत उपकरण को प्याक
तपाईं हाम्रो अन्य सबै उपकरणहरू पनि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ जुन हामी तपाईंलाई Clever Ads प्रस्ताव गर्दछौं। तपाईलाई आवाश्यक पर्ने सबै चीज तपाईले पाउनुहुनेछ ... नि: शुल्कका लागि! व्यवस्थापन र आफ्नो को अनुकूलन गर्न सिर्जना देखि Google Ads अभियानहरू, एक खोजशब्द योजनाकार आफ्नो एसईओ रणनीति रूपरेखा, तपाईँको मा खर्च गर्न $ 150 प्राप्त गर्न गुगल प्रोमो कोड Google Ads अभियानहरू, एक मापन, मोबाइल लागि अनुप्रयोग संग एकीकरण Slack र Microsoft Teams ... तपाई केको लागि पर्खिरहनु भएको छ? हाम्रो Google Chat Bot रोक्नुहोस्, हामीले हाम्रो गृहपृष्ठमा प्रस्ताव राख्नुपर्ने सबै चीजहरू जाँच गर्नुहोस्।